Lakkoofsa tuqaalee jiddugaleessaa tuqaalee tarsaa X-axis jidduutti ifteessa.
Lakkoofsa tuqaalee jiddugaleessaa tuqaalee tarsaa Y-axis jidduutti ifteessa.
Ajajoota dabalataatu baafata haallee fuulaa irra jiru: Ajajoota dabalataatu baafata haallee fuulaa irra jiru:
Gara fuula mudanootaa
Qareen yookiin sararri rogayyaa waanta saxaatoo daangaa ariitii keessa ta'uu qaba.
Dhiyeessa yookiin galmee fakkisaa keessatti, dalagaan kun karaa saajoo Ariitii gara mudana fuulaaAriitii gara mudana fuulaaAriitii gara mudana fuulaa kabala Dirqaalaalee keessaa argatamuus danda'a.
Gara goodayyaa waantaatti
Qareen yookiin sararri raogayyaa waanta saxaatoo daangaa ariitii keessa ta'uu qaba..
Dhiyeessa yookiin galmee fakkisaa keessatti, dalagaan kun karaa saajooAriitii gara handaara waantaattiAriitii gara handaara waantaattiAriitii gara handaara waantaatti kabala Dirqaalaalee keessaa argatamuus danda'a.
Gara tuqaalee waantaatti
Kun kan hojjetu yoo qareen yookiin sararri rogayyaa waanta saxaatoo daangaa ariitii keessa jiraate qofa.
Dhiyeessa yookiin galmee fakkisaa keessatti, dalagaan kun karaa saajoo ariitii gara tuqaalee waantaattiariitii gara tuqaalee waantaattiariitii gara tuqaalee waantaatti kabala Options keessaa argatamuus danda'a.
Yeroo waantota uumuu yookiin deemsisuu
Title is: Tarsaa